September 2013 - Page 2 of 43 - iftineducation.com
Tirada dadka ku maqan dhismaha Westgate oo la shaaciyay Goor dhaweyd
iftineducation.com – Masuuliyiinta sar sare oo ka tirsan amaanka Kenya ayaa maanta xildhibaanada Baarlamaanka Kenya waxay weydiinayaan su’aalo la xiriira weerarkii Westgate ee dalka Kenya. Madaxa guddiga difaaca baarlamaanka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ogaado waxa rasmiga ay yihiin dadkii weerarka ka geystay dalka Kenya. Halkani ka daawo Video Hay’adda laanqeyrta cas ee dalka Kenya ayaa si…
WAR CUSUB: Sarkaalkii Fududeeyay Weerarkii West gate oo Somalia usoo baxsaday Iyo Kenya oo Ku fashilan
iftineducation.com – Sirdoonka Kenya ayaa sheegay in Sarkaalkii Shabaabka ahaa ee Fududeeyay Weerarkii West gate Mall uu u soo baxsaday dhanka Dalkeena Soomaaliya kadib Xogo badan oo arintaas ku saabsan oo ay heleen. Ninkaan oo lagu magacaabo Abuu Sandheere ayaa la sheegay inuu qeyb ka ahaa ragii weeraray isla markana fudeeyay weerarkii Westagte Mall oo aheyd daar ganacsi oo ku taala…
Sirdoonka Kenya oo su’aalo laga weydiinayo Weerarkii Westgate
iftineducation.com – Xildhibaan C/qaadir Dhoore oo ka tirsan Guddiga Amniga Baarlamaanka Kenya oo u warramayay Idaacadda BBB-da laanteeda Afka Soomaaliga ayaa sheegay In ay la xisaabtamayaan dhammaan Hay’adaha Ammaanka Kenya kadib weerarkii Westgate. Halkaan ka daawo Video Xildhibaanka ayaa sheegay in dhammaan Saraakiishooda ay u yeereen ayna weydiin doonaan sababah fududeeyay weerar oo ay u gabeen Howlahoodi sida uu hadalka u…
Soomaalida Haysta Baasaboorada Ajnabiga oo ku Xaniban Dalka Kenya iyo Booliska oo Aruuris ku Haya!! (Daawo Muuqaal+Warbixin)
iftineducation.com – Booliiska dalka Kenya ayaa waxaa la sheegay inay xabsiga dhigeen nin Somal-British ah xilli uu damacsanaa inu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta Airport ee dalkaas Kenya ka dib markii looga shakiyey inuu ku lug lahaa weerarkii ku lagu qaaday xarunta Westgate Mall ee magaalada Nairobi. Ninkaan Soomaaliga oo aan magaciisa la sjhaaciin laakiinse lagu sheegay inuu yahay…
Khilaaf soo shaac baxay oo u muuqda inuu hakin doono maamulkii Cusbaa ee Loo Macaabay G/Hiiraan
iftineducation.com – Maamulka Gobalka Hiiraan ayaa beeniyay in wafdi shaley gaaray magaalada Baladweyne oo uu hoggaaminaayay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudahaay u tageen halkaas siddii ay u badali lahaayeen maamulka hadda ka dhisan gobalkaas. Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca ammaanka arrimaha bulshadda ee maamulka gobalka Hiiraan ayaa qiray in maamulkooda uu waqtiga ka dhammaaday, balse wafdiga shaley soo gaaray Baladweyne aysan u…
War deg deg ah Hogaamiyaha Ururka Xisbulaah ee Somaliland oo xabsiga la dhigay kadib markuu dhawaan taageeray weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen Magaalada Nairobi
iftineducation.com – Maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay Hogaamiyaha Ururka Xisbulaahi ee deeganada Soomaaliland wadaadka lagu magacaabo Sheekh Maxamuud C/laahi Geele. Wararka Hargaysa laga helayo waxa ay ku waramayaan in hogaamiyaha Ururka Xisbulaahi xalay ciidamada ammaanka Soomaaliland ay xabsiga utaxaabeen, sabab aan ilaa iyo iminka lagaran. Halkani ka daawo Video Wadaadkaan ayaa dhawaan taageeray weerarkii Al-Shabaab ay ka geysteen Magaalada Nairobi ee…
Shabaab oo 40 ruux ku xanibay Baardheere, xilli ay ku sii jeedeen Dhoobleey
iftineducation.com – Ururka Al Shabaab oo si buuxdo uga arrimiya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo, ayaa waxay ku xanibeen ilaa 40 ruux, oo ka yimid Magaalada Muqdisho. Dadkaan ayaa waxay shalay soo gaareen Degmada Baardheere, xilli ay doonayeen inay kaga sii tallaabaan Degmada Dhoobleey ee Gobolka Jubbada Dhexe. Laba gaari oo nooca caasiga ay Soomaalida u taqaano, ayay dadkaan la socdeen.…
Muqdisho: Waxaa jawaabtay Idaacaddii lagu eedeeyey addoonsinimada
iftineducation.com – Madaxa Xuquuqul insaanka Hey’ada Inxa Maxamed C/raxmaan Maxamuudoo ka jawaabayay eedeyn kaga timid Mas’uuliyiinta iyo Wariyaasha ka howl gali jiray Radio Xumro , taas oo ku aadaneyn in hey’adu ay musuq maasuqay Mushaaraadkoodi Muddo 9 Bilood ah ayaa aritaas wuxuu ku tilmaamay mid waxba kama jiraan ah. Wuxuu sheegay in arintan ku aadan Radio Xurmo iyo Mushaar la’aanta Shaqaalaha…
DHAGAYSO: Al-Shabaab oo si kulul ugu jawaabay Hadal kasoo yeeray Sh Umul
iftineducation.com – Dhawaan Sh Maxamed Umul oo kamid ah Culumada Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ka xun yahay weerarkii ay Kooxda Shabaab ka gaysteen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sargaal lagu magacaabo Sh Cali Katiim oo katirsan Shabaab ayaa sheegay in Shiikha uu fidnoobay sida uu hadalka udhigay, isla markaana uu diints si qaldan ufaisraty sida uu hadalka udhigay. “Aayaadkii cadeynayay in…
iftineducation.com – Sida ay baahisay Warbaahinta Somaliland Ayaa waxay soo ban dhigtey Guddoomiyaha xisbiga #UCID Eng. Faysal Cali Waraabe Oo Salaanta Kaqaadi waayay Madaxwayne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) Wakhti Ay Ku Kulmeen Xaflada Qalin Jabinta Ardayda Jaamacada #Hargeysa Isagoo Sidoo Faysal iska Diidey inuu wax hadal ah ka jeediyo goobtaasi.